Home Wararka Yaa ka danbeeyay soo saarida Jadwalka (beenta ah) Doorashada, lacagtana lagu raadinayo?
Yaa ka danbeeyay soo saarida Jadwalka (beenta ah) Doorashada, lacagtana lagu raadinayo?
Waxaa shalay la soo saaray jadwal cusub oo sheegaya xiliga la qabanayo doorashada aqalka hoose. Jadwaalkaan oo ah mid ka fog xaqiiqda isla markaana lagu soo saaray si deg deg ah ayaa ujeedada laga lahaa ahayd in lacag looga helo beeesha Caalamka.
Waxa aan wali la cadeeynin oo aan laga heshiinin qodobadii la isku haystay, waxaana muuqata in ayan marnaba macquul ahayn in doorasho ku dhacdo xliga ku qoran jadwalkaan. Sidee bey suragal ku tahay soo saarida jadwal iyada oo aan wali laga heshiinin habraaca doorashada.
Mid kamida madaxda gudiga doorashooyinka ayaa u sheegay MOL in amarka lagu soo saaray jadwalka uu ahaa mid uu bixiyay RW Rooble. Waxa uuna howlwadeenkaas sheegay in RW Rooble uu ku doonayay in uu muujiyo beesha caalamka in doorashadii socoto si lacagtii la baalanqaaday loo sii daayo.
Kooxaha isku sheega in ay yihiin Midoga Musharaxiinta ayaa dhankooda u muuqda kuwo jahada ka dhuntay, isla markaana lumiyay karaamadii umadda u haysay. Waxa ay ku guuldareeysteen in ay culays siyaasadeed saaraaan Farmaajo iyo RW Rooble oo labada isku aragti ka ah in doorashada dib u dhacdo ilaa laga gaarayo sanadka 2022.